Ego ole ka na-akọwapụta Mmepụta vidiyo? | Martech Zone
My gị n'ụlọnga ezipụwo ọrụ ole na ole na-akọwa vidiyo maka ndị ahịa anyị. Anyị emeela nwetara ụfọdụ nsonazụ dị ịtụnanya karịa afọ mgbe ị na-eji ha, mana ọnụahịa dịgasị iche iche nke ukwuu. Ọ bụ ezie na vidiyo na-akọwa ihe nwere ike iyi ka ọ na-aga n'ihu n'ihu, enwere ọtụtụ akụkụ na-akpụ akpụ iji tinye ọnụ irè nkọwa video:
edemede - edemede nke na - achọpụta nsogbu ahụ, na - enye azịza, ọdịiche dị iche iche, ma na - akpali onye na - ele ya ime ihe mgbe ha kirisịrị vidiyo ahụ.
atụ - a ghaghị iji nlezianya dozie ihe odide na ihe nkiri iji jikọta onye na-ekiri ya n'ụzọ mmetụta uche.
Olu olu - ọkachamara ọkachamara na-eme ka ọ dị arọ na ọlaedo, na-eweta edemede gị na ndụ ma soro onye na-ekiri gị.
-ada - nsonaazụ ụda na egwu dị n'okirikiri nke agwakọtara ya na nke ọdịyo na flawlessly dabara na animation dị mkpa.
Animation - ihe mmegharị nke dị mma, na-agbanwe agbanwe, na oge nke ọma ga-eweta ọhụụ ọnụ.
Imirikiti ụlọ ọrụ na-eme ihe nkiri na-akwụ ụgwọ kwa nkeji vidiyo ebe ọ bụ na mbọ ahụ dabara na mmepụta achọrọ. Nke a apụtaghị na vidiyo nkeji 5 ga-abụ oge 2.5 ụgwọ nke vidiyo nkeji 1, enwere ego ụfọdụ ka ị na-aga. Agbanyeghị, ka ogologo onye nkọwa gị dị, otu ahụ ka ị nwere ike metụta arụmọrụ nke vidiyo nkọwa gị. A ghaghị ịkọwapụta vidiyo dị oke nkọwa ma jikọta ya na naanị nkọwa ziri ezi nke egosiri.
Ma mgbe ọ na-eri, Andre Oentoro nke Achịcha karịrị na-enye ndụmọdụ na-esonụ.
Họrọ onye dị ọnụ ala apụtaghị na ị ga-enweta nsonaazụ kacha njọ, na ịkwụ ụgwọ ọnụahịa anaghị akwụ ụgwọ afọ ojuju.
Etu ị ga - esi họrọ ụlọ ọrụ na - emepụta ihe dị na vidiyo
mmefu ego - Iyo maka ịchọta ụlọ ọrụ na-akwụ ụgwọ n'ime mmefu ego gị.
Review - Were a lee anya na ha pọtụfoliyo ma bulie ndị na-amasị gị.
Gwa - Zipu nkọwa banyere ihe ịchọrọ maka vidiyo na-akọwa gị.
quote - Jụọ maka see okwu.
Olileanya - O doro anya setịpụrụ atụmanya maka ihe ị ga-akwụ.
Nwere ike ịlele iji hụ ma ha ga-ewepu ndị ga-akọwapụta ọdịnihu ma ọ bụ na ha agaghị ewepụ ebe ọ bụ na etinye aha azụmaahịa na nkọwapụta na vidiyo izizi. Nwekwara ike ịjụ ma enwere ego ọ bụla ma ọ bụrụ na ị nye ederede, ihe atụ, egwu ma ọ bụ akụkụ ọ bụla ọzọ. Echefula na ụlọ ọrụ vidiyo na-akọwa na-enye gị vidiyo vidiyo, ọ bụghị mmegharị ahụ. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ ndezi, ị ga- alaghachi nweta ọkwa ọzọ.
Buru n'uche na, belụsọ na inwetụla ahụmịhe, kọwaa ahụmịhe onye na-ese vidiyo bụ akụkụ nke ịkwụ ụgwọ ahụ - ha nwere ike ịma karịa gị!
Ego Ole Ka Nkọwa Na-efu?
Na ozi infographic a site na Breadnbeyond, Ihe omuma nke ndi nyocha zuru oke nke ichoputa ihe nlere nke kachasi ihe nlere, ụlọ ọrụ ahụ gosipụtara usoro na usoro zuru ezu banyere otu esi achọta ụlọ ọrụ kachasị mma iji rụọ ọrụ. Otu akụkụ nke infographic nke ahụ enyere, kwa, bụ ụgwọ maka isi ụlọ ọrụ vidiyo ụlọ ọrụ. Ogologo a di oke - n'etiti $ 1,000 na $ 35,0000 site na vidiyo na-akọwa. Imirikiti ọrụ ndị ahịa anyị nyere anyị adaala na $ 10,000 nso maka onye nkowa 90-second.
Nke a bụ ozi infographic zuru oke na ọnụahịa ụlọ ọrụ na-emepụta vidiyo na-akọwa si Wizmotions, Gisteo, Hound Studio, Achịcha karịrị, Mfe Akụkọ Akụkọ, Fire Starter vidiyo, Nweta DemoDuck, Epipheo, Kọwaa, na EchicheRocket. Anyị ejiriwokwa ya Yum Yum vidiyo ndị ọnụahịa ha dịka Epipheo.
Tags: Achịcha karịrị-eriNweta DemoDuckEpipheonkọwa videokọwaa ụlọ ọrụ vidiyoonye nkocha vidiyokọwaa ụlọ ọrụ na-emepụta vidiyoKọwaaFire Starter vidiyoGisteoHound Studioego oleego ole ka onye na-akọwa vidiyo na-eriotúEchicheRocketVidio AhịaMfe Akụkọ AkụkọWizmotionyum yum vidiyo
Sep 3, 2017 na 10:03 PM
Isoro otu ụlọ ọrụ nọ n’obodo na-emepe emepe bụ ịgba chaa chaa. Ọbụna ndị tụkwasịrị obi na-arụ ọrụ na ihe ngosi dịka Simpsons ma ọ bụ Venture Brothers ma ọ bụ ọwa dị ka Disney ma ọ bụ Nickelodeon, na-ejedebe ezigbo ego nke ọrụ ha nke ndị omenkà na-edozi na steeti.
Sep 4, 2017 na 1: 26 AM
Dị ka ọrụ ọ bụla zuru ụwa ọnụ, e nwere nnukwu ndị ụlọ ọrụ dị egwu na ebe niile. Anyị ejirila obi eziokwu hụbeghị mmekọrịta gbasara mmalite ụlọ ọrụ ahụ. Anyị enweela ezigbo ihu ọma na steeti.